Oniversiten’ Antananarivo Lany filoha ny Profesora Mamy Ravelomanana
Nahazo filoha vaovao sady tanora ny Oniversiten’Antananarivo. Voafidy hitantana izany ny Profesora Mamy Ravelomanana, mpahay toekarena sady anisan’ny mpikambana namorona ny faribolan’ny mpandalina ny hary eto Madagasikara (CREM).
Tapaka tamin’izany fa ho any amin’ny primatiora anio ny solontenan’izy ireo hametraka ny fampahafantarana mialoha ny amin’ny fitokonana atao (préavis de grève) sady hiresaka mivantana amin’Andriamatoa praiminisitra Ntsay Christian momba ireo fitakiana ataony. Anisan’ny horesahin’izy ireo ny fanemorana ny fifidianana hotanterahin’ny oniversite miankina amin’ny fanjakana mba hisian’ny fangaraharana sy ara-pomba demokratika ary andraisan’ny rehetra anjara. Eo ihany koa ny fitakiana ny amin’ny tsy hanapotehana ny oniversite miankina amin’ny fanjakana sy ny foibe fikarohana nasionaly manoloana ny fampiatoana sy ny fanafoanana ny asan’ireo mpampianatra mpikaroka manampahaizana manokana sy efa manana traikefa tanteraka. Tokony hoekena hatrany ireo na dia tsy ampy 15 taona aza no niasany tamin’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana mba hanohy ny asa fampianarana sy ny fanarahana manokana (encadrement) ireo hanatanteraka ny famintinana ny fianarana natao (thèse). Ankoatra izay dia horesahina amin’ny praiminisitra ihany koa ny famerenana ny fikilasiana (reclassement) sy ireo ora mihoatra niasan’ireo mpampianatra (heure supplémentaire) izay tsy naloan’ny fanjakana mihitsy nanomboka tamin’ny tapany faharoa tamin’ny taona 2016 hatramin’izao. Nampitandrina ary nanambara ihany koa izy ireo fa hiroso amin’ny dingana mafimafy kokoa raha mbola manao be marenina sy tsy mahita vahaolana ny fanjakana anatin’ny 72 ora. Tsy mety aminay, hoy izy ireo ny fanirahana ireo olona, tsy fantatra na mpitsikilo avy amin’ny fitondram-panjakana nifampiresaka tsy tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny sabotsy sy alahady lasa teo izay nilaza ho nampita hafatra sy hikaro-bahaolana.